” အင်းစိန်ထောင် အတွင်း မှ ပရလောကသားများ ” ( ဖြစ်ရပ်မှန် အပိုင်း – ( ၈ ) ) – Na Pann San
” အင်းစိန်ထောင် အတွင်း မှ ပရလောကသားများ ” ( ဖြစ်ရပ်မှန် အပိုင်း – ( ၈ ) )
Na Pann San W | March 19, 2020 | Knowledge | No Comments
အောက်တွင် Unicode ဖြင့် ဖော်ပြပေးထားပါသည် ….
အပ်ချလောင်း သော့ဝိဇ္ဇာ သူခိုးကြီး မြင့်သိန်း ”
လက် ပါး တိုက် မှာ ခက်ခဲတဲ့နေ့တွေ ကို စမ်းချောင်းသား ဖြတ်သန်း နေတဲ့အချိန်မှာ ထူးဆန်းတဲ့ လူတစ်ယောက် နဲ့ ထပ်မံဆုံတွေ့ခဲ့ရပြန် ပါ တယ်။ သူ့ကို တိုက်တန်းစီးဖြစ် တဲ့ ပိုးဟပ်ဖြူ က မိတ်ဆက် ပေးတာ ပါ ။ သူကတော့ ရုပ်ရည် သန့်သန့်ပြန့်ပြန့်နဲ့ သူ့ကိုယ်သူ “ သူခိုးကြီးမြင့်သိန်း” လို့ မိတ်ဆက် ပါတယ် ။ သူက ရန်ကုန် သူခိုးလောကထဲ မှာ မြန်မာ့ ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ် ပါတီခေတ် ကတည်းက ကျင်လည် နေတဲ့သူဖြစ် ပါတယ် ။
ထောင်ထဲကို ၀င်ခလုတ် ထွက်ခလုတ် လုပ်နေရင်း က သင်္ဃန်းကျွန်း မှာ ရှိတဲ့ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် ကို ခေါင်မိုးက ဖောက်ပြီး ငွေတွေ ခိုးခဲ့တဲ့အတွက် နှစ်ကြီးထောင်ကျ ခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူက ဉာဏ်ကောင်း တယ် ။
အလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင် သေချာလေ့လာပြီးပိုင်မှ လုပ်တယ်။ သင်္ဃန်းကျွန်းဘဏ် ကို မဖောက်ခင် ရက်ပေါင်းများစွာ လေ့ လာပြီးမှ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ဖောက်ထွင်းခဲ့ တာဖြစ်တယ်။ဖောက်ထွင်းမယ့် ရက်ကိုလည်း ၀န်ထမ်းတွေ ရုံးမတက်တဲ့ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ ရုံးပိတ်ရက် ကိုချိန်ပြီး သောကြာနေ့ ညမှာ ဖောက်ထွင်းခဲ့ တာ ဖြစ်တယ်။
ဖောက်ထွင်းတဲ့နေရာမှာ ဒီလိုဉာဏ် ကောင်းပေမယ့် မတရား သဖြင့် ရရှိလာတဲ့ငွေတွေ ကို လောဘ မသတ်နိုင်ဘဲ အသုံးအဖြုန်းကြီး တဲ့အတွက်ကြောင့် ထုံးစံအတိုင်း ရဲတွေရိပ် မိပြီး အဖမ်းခံ ခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူက ထောင်ထဲ ရောက်တဲ့အခါ သင်္ဃန်းကျွန်း ဘဏ် ဖောက်ထွင်းမယ့်ကိစ္စ နဲ့ပတ်သက်ပြီး “သူခိုးလက်ကသူဝှက်လု” ခံရတဲ့အကြောင်း ကိုလည်း မချိတင်ကဲ ပြန်ပြောပြလေ့ရှိပါ တယ်။ တကယ်တော့ သူဖောက်ထွင်းပြီး ဘဏ်ကယူသွားတဲ့ငွေပမာဏထက် ကျော်လွန်ပြီး ဘဏ်ဝန်ထမ်းတွေက စာရင်းပိုပြခဲ့ တဲ့အတွက် ဒီပွဲမှာ သူနှပ်ပျစ်ခံခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၈၈ ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံ ကြောင့် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာ ခွင့်နဲ့ သူခိုးကြီး မြင့်သိန်း လွတ်သွားပေမယ့် ထုံးစံအတိုင်း ဒီလောကထဲမှာပဲ ကျင်လည်နေတာဖြစ်တဲ့ အတွက် နောက်ခိုးမှုတစ်ခုနဲ့ ထောင်ပြန်ကျ ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြစ်ပုံကတော့ သင်္ဃန်းကျွန်းဘဏ်အမှု နဲ့ ထောင်ကျနေရာကနေ ရဲဘက်ထွက်ရ တယ်။ နောက်တော့ ရဲဘက်ကနေ လွတ်လာတယ်။ အပြင်ပြန်ရောက်တော့ တခြား အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ကိုင်မစား တတ်တော့ဘူး။ ဒီတော့ ညတစ်ည လမ်းမတော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ အိမ်တစ်အိမ်ကို ၀င် ခိုးတယ်။
ကံဆိုးချင်တော့ အိမ်တွင်းရတနာ ပစ္စည်းတွေ ခိုးနေတုန်းမှာ အိမ်ရှင်အဘွား ကြီး နိုးသွားတယ်။ ဒီတော့ အဘွားကြီးကိုပါ ခြေလွန်လက်လွန်ရိုက်လိုက်မိတယ်။
အဘွား ကြီးက အဲဒီခေတ်က အငြိမ်းစားတပ်အရာ ရှိကြီးတစ်ဦးရဲ့ဇနီး ဖြစ်တာကြောင့် ဒီအမှု ကို ရဲက ကြပ်ကြပ်မတ်မတ် စုံစမ်းအရေး ယူတယ်။ နောက်ဆုံး သူခိုးကြီးမြင့်သိန်း လက်ရာမှန်း သိသွားပြီး ခိုးမှုရော၊ ရိုက်မှုပါ နှစ်မှုလုံးနဲ့ ထောင်ကျလာတယ်။
အခုတော့ အင်းစိန်ထောင်ထဲမှာ ကျင်လည်နေတာ ပေါ့။ စမ်းချောင်းသားက ဘောက်ချာတွေ ကို အရောမ၀င်ပေမယ့် ဆေးလိပ်တော့ အရမ်းသောက်တယ်။ နေ့ဘက် ဆေးလိပ် သောက်ရတာ မခက်ခဲပေမယ့် ညဘက် ကျရင် အကျဉ်းသားမီးခြစ်မကိုင်ရလို့ ဆေးလိပ်သောက်ရတာ အရမ်းခက်ခဲတယ်။
ဒီ အကြောင်းကို သူခိုးကြီးမြင့်သိန်းသိတော့ “ မင်းကွာ ဒီအတွက်များ သောကဖြစ်နေ သေးတယ်။ ၀ါဒါတွေကို ဘာမှအောက်ကျခံ စရာမလိုဘူး။ ငါပြမယ်။ ဒီမှာကြည့်” လို့ ပြောပြီး ၀ါယာကြိုးအနီနဲ့အနက် နှစ်ချောင်း ယူလာတယ်။
ပြီးတော့ အထဲက သွပ်နန်း ကြိုး အမျှင်လေးတွေကို ထုတ်လိုက်တယ်။ အဲ့လိုထုတ်ပြီး တိုက်ခန်းဝမှာရှိတဲ့ သံတိုင် မှာ ခတ် လိုက်တော့ ၀ါယာကြိုးမှာ မီးလာ တောက်တယ်။ သူက အဲ့ဒီမီးတောက်နဲ့ ဆေးလိပ်မီးညှိပြတယ်။ ဒီမှာတင် စမ်း ချောင်းသားက သူခိုးကြီးမြင့်သိန်းကို တော် တော်အထင်ကြီးသွားတယ်။
သူခိုးကြီးမြင့် သိန်းကလည်း စမ်းချောင်းသား လိုအပ်တဲ့ ၀ါယာကြိုးကို ဘယ်ကဘယ်လိုရှာလာမှန်း မသိ ရှာပေးတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ညဘက် ဆေး လိပ်သောက်ရတာ အဆင်ပြေသွားတယ်။ တစ်ရက်တော့ သူခိုးကြီးမြင့်သိန်းနဲ့ စမ်း ချောင်းသားတို့ ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျမယ့် နေ့ တစ်နေ့ ပေါ်ပေါက်လာတယ်။ ဖြစ်ပုံက တော့ အမျိုးသမီးထောင်က စတာပါပဲ။
အမျိုးသမီးထောင်မှာလည်း ထောင် တွင်း ပြစ်ဒဏ်လုပ်ရင် တိုက်ပိတ်တဲ့ပြစ်ဒဏ် ရှိတယ်။ တစ်ခါက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်တက်္ကသိုလ် ကျောင်း သားသမဂ္ဂ(ရကသ)က ကျောင်းသူ တင်တင်ညိုဟာ မိန်းမဆောင်တန်းစီး ခင်စိန်နဲ့ ရန် ဖြစ်ကြတဲ့အတွက် တန်းစီးခင်စိန် ဆီးအိမ် ထိသွား တယ်။
(ယင်းအဖြစ်အပျက်ကို အင်းစိန်ထောင်မှ ဂန္တွဝင်လူမိုက်ကြီးစာအုပ် တွင်ဖော်ပြပြီး) ဒီအတွက် ကြောင့် ရကသ ကျောင်းသူ တင်တင်ညိုကို တစ်လ တိုက် ပိတ်လိုက်တယ်။
ပြစ်ဒဏ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာ တော့ တင်တင်ညိုကိုတိုက်ဖွင့်ပေးဖို့ မိန်းမ ထောင်မှူးတွေကို ထောင်ပိုင်ကြီးက အမိန့် ပေးလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီမှာပြဿနာ စတတ်တော့တာပဲ။ တင်တင်ညိုရဲ့ တိုက် အခန်းတံခါးကိုဖွင့်တော့ ဖွင့်လို့ မရဘူး။ သော့က ကြောင်သွားတာလား။ သော့တံ တွေကပဲ သံချေးတက်နေတာလား။ ဂျမ်း ဖြစ်သွားပြီး သော့ကဖွင့်မရဘူး ဖြစ်နေ တယ်။
ဒီဇယ်ဆီတွေ၊ အုန်းဆီတွေထည့်ပြီး ဖွင့်တော့လည်း မရဘူး။ ဂတ်ကြီးမှာရှိတဲ့ မာစတာကီးကိုယူပြီးဖွင့်တော့လည်း သော့ က မပွင့်ဘူး။ ဒီတော့ ထောင်မှူးမတွေလည်း ချွေးပြန်နေပြီ။ တိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ တင်တင် ညိုကလည်း ပြစ်ဒဏ်ပြည့်ရဲ့သားနဲ့ တိုက်ဖွင့်မပေးရင် ပြဿနာရှာမယ်ဆိုပြီး ကြိမ်း ၀ါးနေပြီ။
မကြာခင် ဒီပြဿနာက တစ် ထောင်လုံး ပြန့်သွားပြီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်း သားတွေသိရင် ပေါက်ကွဲတော့မယ့်အခြေ အနေပါပဲ။ မတတ်သာ တဲ့အဆုံး ထောင် မှူးမတွေက ထောင်ပိုင်ကြီးကို သွားတင်ပြ တယ်။ ထောင်ပိုင်ကလည်း ဂဟေတို့ပြီး သံတိုင်တွေဘာတွေ ဖြတ်ရရင် ရုံးချုပ်ရဲ့ သဘောတူညီချက် လိုအပ်တယ်။
အသိ မပေးဘဲလုပ်လို့ သိသွားရင် ထုချေလွှာ အတောင်းခံရနိုင်တယ်။ အခန့်မသင့်ရင် ရာထူးတောင်ပြုတ်သွားနိုင်တယ်။ ထောင် ပိုင်လည်း ရုတ်တရက် ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ဘူး။ နောက်ဆုံး တိုက်ထောင်မှူးကြီးက ထောင်ပိုင်ကြီးကို တင်ပြတယ်။
သူ့ဆီမှာ သော့ဝိဇ္ဇာတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အပ်ချလောင်း(ခ) မာစတာကီး သူခိုးကြီးမြင့်သိန်းဆိုတာရှိတဲ့ အကြောင်းနဲ့ သူ့ကို မိန်းမထောင်ခေါ်ပြီး ဖွင့်ခိုင်းရင်ရနိုင်တဲ့အကြောင်း တင်ပြတော့ ထောင်ပိုင်က ချက်ချင်းသဘောတူတယ်။
ဒါကြောင့် တိုက်ထောင်မှူးကြီးနဲ့ ၀န် ထမ်းတွေ သူခိုးကြီးမြင့်သိန်းဆီ ရောက်လာ ကြတယ်။ ပြီးတော့ မိန်းမထောင်က တိုက် တံခါးသော့ကို ဖွင့်ပေးဖို့ပြောတော့ သူခိုး ကြီးမြင့်သိန်းက အသည်း အသန်ငြင်း တယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ထောင်ထဲမှာ သော့ဝိဇ္ဇာမှန်းသိရင် ထောင်ဝါဒါတွေက စိတ်မချ တော့ဘဲ အရေးကြီးတဲ့အကျဉ်းသားအရာရှိ ရာထူးနေရာမှာထားဖို့ ငြင်းပယ်လေ့ရှိပါ တယ်။
ဒါကို သူခိုးကြီးမြင့် သိန်း က ကြိုမြင် ထားတော့ သူ့ရဲ့ သော့ဝိဇ္ဇာဂုဏ်ပုဒ်ကို ထောင်ထဲမှာ အသာဖျောက်ထားတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဆေးရုံမှာ နေရာတစ်ခုရ ပြီး အနေချောင် အစားချောင်နေတာပေါ့။ အခုတော့ အကုလိုလ်ဂြိုဟ်စီးပြီး တိုင်ပတ် မယ့်အမှု သူ့ထံကို ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် ရောက်ရှိလာပြီ။ သူခိုးကြီးမြင့်သိန်းက ထောင်မှူးကြီး အကူအညီတောင်းတာကို အသည်း အသန်ငြင်းတယ်။
သူခိုးကြီး ဘာ ကြောင့်ငြင်းတယ်ဆိုတာကို ထောင်မှူးကြီး နဲ့အတူပါလာတဲ့ ထောင်မှူးအောင်စိုးက လည်း သဘောပေါက်သွားတယ်။ ဒီတော့ သူခိုးကြီးကို တစ်ချက်လှမ်းထောက်တယ်။
“ကဲ ငါပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ ပြောမယ် သူခိုးကြီး။ မင်း မိန်းမထောင်က သော့ကို ဖွင့်နိုင်ရင်လည်း မင်းကို ထောင်မှာ အနေ ချောင်အောင် ငါအာမခံတယ်။ အေး ဖွင့် နိုင်ရဲ့သားနဲ့ လက်ကောက်ကျတယ်ဆိုရင် တော့ ရှေ့တစ်ပတ်ကျရင် ရဲဘက်ထွက်ဖို့ ပြင်ထားပေတော့”
ထောင်မှူးအောင်စိုးရဲ့ စကားကြောင့် သူခိုးကြီး ဆတ်ဆတ်ခါသွားတယ်။ နောက် ဆုံး သော့လိုက်ဖွင့် ပေးမယ်လို့ ကတိပေး လိုက်ရတယ်။
ထောင်က သော့ဖွင့်ဖို့ ဘာ ကိရိယာတွေ လိုသလဲဆိုပြီး သူခိုးကြီးကိုမေး တော့ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ဘာမှမတောင်း ဘဲ စက်ဘီးစမုတ်တံလေးတစ်ချောင်းသာ တောင်းတယ်။ ထောင်မှူးကြီးက သူ့ကို မယုံရဲ ယုံရဲနဲ့ စက်ဘီးစမုတ်တံ ပေးလိုက် တယ်။ သူခိုးကြီးမြင့်သိန်းလည်း တင်တင် ညို တိုက်ခန်းသော့ကို စက်ဘီးစမုတ်တံနဲ့ အမျိုးမျိုးစမ်းပြီး ဖွင့်လိုက်တာ ၁၅ မိနစ် အတွင်းမှာ သော့ပွင့်သွားတယ်။
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ထောင်ရဲ့အကြပ်အတည်း တစ်ခုကို သူခိုးကြီးမြင့်သိန်းက ကယ်တင်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ သူလည်း ထောင်မှာ အပ်ချလောင်းသော့ဝိဇ္ဇာ ဆိုပြီး နာမည်ကြီး သွားတယ်။ ထောင်က ကတိစကားအတိုင်း သူခိုးကြီးမြင့် သိန်း ကို ပိုနေမြဲ ကျားနေမြဲ ထားလိုက်တော့ သူလည်း နည်းနည်းဘ၀င် ခိုက်သွားတယ်။
မြောက် လည်း မြောက် သွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူခိုးကြီးမြင့်သိန်းက စမ်းချောင်းသားအပေါ်မှာတော့ အခင် အမင်မပျက်ဘူး။ စမ်းချောင်းသားလိုအပ် တဲ့ အကူအညီကို အမြဲပေးလေ့ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့နှစ်ယောက် ကံဆိုးမယ့်နေ့ တစ်နေ့ ရောက်ရှိလာပါပြီ။
ထောင်မှာ အကျဉ်းသားတစ်ယောက် အတွက် အသားစားရက်တစ်ရက်ပေးသလို တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးအတွက် လက်သုံးဆစ်ခန့်ရှိတဲ့ ရွှေဝါဆပ်ပြာ အတုံးသေး တစ်တုံးကိုလည်း ပေးပါတယ်။ ဒီအတုံး တစ်တုံးဟာ လျှော်ဖို့ဖွပ်ဖို့အတွက် တစ်ပတ် စာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ အကျဉ်း သားတစ်ယောက်အတွက် ဒီလောက်ရွှေဝါ ဆပ်ပြာ အတုံးတစ်တုံးဟာ မလောက်ငပါ ဘူး။
ထောင်ကပေးတဲ့ အကျဉ်းသားဝတ်စုံ တွေဟာ ချည်ကြမ်းတဲ့အတွက် အ၀တ် လျှော်ဖို့ ဆပ်ပြာသုံးရင် အတော်ကုန်ပါ တယ်။ ဒါပေမဲ့ ရွှေဝါဆပ်ပြာ မလောက်င ကြောင်း ဘယ်အကျဉ်းသားကမှ ထောင် အာဏာပိုင်ကို မတင်ပြရဲပါဘူး။ တင်ပြရင် လည်း ထောင်ဝန်ထမ်းတွေက တခြားတစ် နည်းနည်းနဲ့ ပညာပေးလေ့ရှိပါတယ်။
တစ် ခါကတော့ စစ်ခွေးတိုက်မှာ ပုံစံဆပ်ပြာ မလောက်လို့ ထောင်ပိုင်ကို တင်ပြချင်တဲ့ အကျဉ်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သုံးခွသား သားသား ဆိုသူဟာ ထောင်ပိုင် မလာတဲ့ အတွက် အခန်းဖော် တောင်ဥက္ကလာသား လှဦးကို ဘာရန်ငြိုးရန်စမှမရှိဘဲ ဂန်ဖလား အောက်မှာ ခုထားတဲ့ အုတ်နီခဲနဲ့ ထုသတ် ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ရှိခဲ့ပါတယ်။ အခုလည်း စမ်းချောင်းသားအတွက် ပုံစံဆပ်ပြာဟာ မလောက်ငပါဘူး။
ဒါကြောင့် သူခိုးကြီးမြင့် သိန်းက ဆေးရုံမှာ လူနာတွေ ရေချိုးလျှော် ဖွပ်ရင်း ကျန်ခဲ့တဲ့ ရွှေဝါဆပ်ပြာအတိုအစ အတုံးအခဲလေးတွေကို လုံးလုံးပြီး နေလှန်း ထားတယ်။ သူ့ကိုဘာလုပ်တာလဲမေးတော့ “ ဒါဟာ စွန့်ပစ်ပစ်္စည်းတွေကို ပြန်အသုံးချဖို့ လုပ်တာ။
ထောင်ဥပဒေအရ ဘာနဲ့မှ ဒုက္ခ ပေးလို့မရဘူး။ ဒီဆပ်ပြာခဲလေးတွေက တန်းစီးတွေရှာတဲ့ အပူစာနဲ့ တခြားစီပဲကွ” လို့လည်း ပြောလေ့ရှိတယ်။
ရွှေဝါဆပ်ပြာ အခဲလေးတွေ ခြောက်တော့မှ စမ်းချောင်း သားကို လျှော်ဖို့ဖွပ်ဖို့ သွားသွားပေးတယ်။ စမ်းချောင်းသားကလည်း သူခိုးကြီးမြင့် သိန်းကို ကျေးဇူးတင်နေတာပေါ့။
တစ်ရက်တော့ သူခိုးကြီးမြင့်သိန်းဟာ စမ်းချောင်းသားကို အရင်ပေးနေကျ ရွှေဝါ ဆပ်ပြာခဲထက် ပိုကြီးတဲ့ဆပ်ပြာခဲလေးကို ပေးတယ်။ ပြီးတော့ ထူးထူးဆန်းဆန်းစကား တစ်ခွန်းပြောတယ်။
“ ဒီဆပ်ပြာကိုတော့ မင်းမသုံးနဲ့ကွာ။ ငါ့အတွက် သိမ်းထားပေးပါ”
“ ခင်ဗျား ဘာလုပ်မလို့လဲ”
သူခိုးကြီးမြင့်သိန်းက ရယ်စရာမဟုတ် တာကို ရယ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့မှ ဆက် ပြောတယ်။
“ငါလည်း လောဘနည်းနည်းတက် သွားတယ်။ စောင်တွေ ဘာတွေ လျှော်တဲ့ အခါကျ ဒီဆပ်ပြာတုံးကို မင်းဆီက ပြန် တောင်းမလို့ သိမ်းထားပေးဖို့ ပြောတာ”
စမ်းချောင်းသားလည်း သူခိုးကြီးမြင့် သိန်း ပြောတဲ့အတိုင်း သူပြောတဲ့ ရွှေဝါ ဆပ်ပြာခဲကို သိမ်းထား ပေး လိုက်တယ်။ အဲဒီအချိန် (၄) ဆောင် တောင်ယာထဲမှာ ဘိန်းဖြူတွေမိတဲ့သတင်း ရောက်လာ တယ်။
ထောင်က အတွင်းထဲကို ဘိန်းဖြူတွေ ဘယ် လို ခိုးသွင်းနေသလဲဆိုတာ လိုက်စုံစမ်းနေ တယ်။ ၀န်ထမ်းတွေလည်း မချောင်ဘူး။ သတင်းတွေကတော့ အမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာ ပဲ။
ဒီသတင်းတွေထဲမှာ ဘိန်းဖြူနဲ့ ပတ် သက်ပြီး ကျော်စောသတင်းရှိတဲ့ တိုက် တန်းစီး ပိုးဟပ်ဖြူတို့လည်း ပါနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီကိစ်္စက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ နဲ့ ဘာမှမဆိုင်တာမို့ စမ်းချောင်းသားလည်း လက်ပါးတိုက်မှာ အေးအေးဆေးဆေးပဲရှိ နေပါတယ်။
တစ်မနက်တော့ လက်ပါးတိုက်ကို ၀န်ထမ်း ၂၀ လောက်ရောက်လာပြီး တလာ စီတယ်။ တလာစီတယ်ဆိုတာ ကုလား စကားဖြစ်ပြီး ရှာဖွေရေးလုပ်တာကို ပြော တာပါ။ “ ပုံစံ” လက်ပါးတိုက်တစ်ခုလုံးကို တစ်စစီဖြစ်အောင် မွှေတယ်။
အဓိကက ပိုးဟပ်ဖြူကို ထောင်ကဖမ်းတာ။ ဒါပေမဲ့ ကြိုသတင်းရထားတဲ့ ပိုးဟပ်ဖြူက အားလုံး ဖျောက်ထားပြီးပြီ။ ဘာပစ္စည်းမှရှာမတွေ့ ဘူး။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ ကံဆိုးချင်တော့ စမ်း ချောင်းသားအခန်းထဲက ပုံသဏ္ဌာန်မကျတဲ့ ရွှေဝါဆပ်ပြာကို ၀ါဒါတွေ တွေ့သွားတယ်။ ၀န်ထမ်းက ထောင်မှူးကို ဒီရွှေဝါဆပ်ပြာက လုံးထားတယ်ဆိုပြီး သွားပြတယ်။ စမ်း ချောင်းသားက လှမ်းတားတယ်။
“ မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ။ ဒီဆပ်ပြာတုံးက စောင်လျှော်ရင် သုံးဖို့။ လူတစ်ယောက် လာအပ်ထားတာ”
ထောင်မှူးက ဘယ်သူအပ်တာလဲမေး တော့ လွယ်လွယ်ပဲ ကိုမြင့်သိန်းလို့ ဖြေ လိုက်တယ်။
ဘယ်မြင့်သိန်းလဲလို့ ထပ်မေးတော့ သူခိုးကြီးမြင့်သိန်းလို့ဖြေလိုက်တယ်။ စကား လည်းဆုံးရော ထောင်မှူးက ရွှေဝါဆပ်ပြာ ခဲကို ခွဲလိုက်တယ်။
ရွှေဝါဆပ်ပြာတုံးထဲက ထွက်လာတဲ့ စက်ဘီးစမုတ်တံ အတိုလေး ကြောင့် စမ်းချောင်းသား အံ့သြသွားတယ်။ ဒီပစ္စည်းကို တွေ့သွားပြီးပြီးချင်း ထောင် မှူးက သူခိုးကြီးမြင့်သိန်းကို ချက်ချင်းခေါ် လိုက်တယ်။ သူခိုးကြီးမြင့်သိန်းကလည်း ဒီ ပစ္စည်းဟာ သူ့ပစ္စည်းဆိုတာ ၀န်ခံတယ်။
“ မင်းဘာလုပ်ဖို့လဲ” လို့မေးတော့ သူခိုး ကြီးက ဆပ်ပြာတုံးလေးတွေ လုံးတဲ့အခါ ခိုင်အောင်လို့ထည့်ထားတာပါလို့ ဖြေတယ်။ သူခိုးကြီး ဖြေသံလည်းဆုံးရော ထောင်မှူး တွေ ၀ါဒါတွေက တအုန်းအုန်းနဲ့ရိုက်တော့ တာပါပဲ။
တိုတိုပြောရရင် သူခိုးကြီးမြင့်သိန်း ကို ရုံးတင်တယ်။ ပြီးတော့ စက်ဘီးစမုတ်တံ တရားမ၀င်ကိုင်ဆောင်မှုနဲ့ တိုက်ပိတ်လိုက် တယ်။ သူခိုးကြီးမြင့်သိန်းရဲ့ စက်ဘီးစမုတ်တံကို သိမ်းထားပေးတဲ့ စမ်းချောင်းသားကို လည်း လက်ပါးတိုက်မှာ ဒီအတိုင်းမထား တော့ဘူး။ နောက်ဆုံး စမ်းချောင်းသားကို တွဲဖက်ထောင် (၂) တိုက် အနောက်ခြမ်းကို ပို့လိုက်တယ်။
အဲဒီမှာ စမ်းချောင်းသားတစ်ယောက် မကျွတ်လွတ်တဲ့သူတွေနဲ့ ဆုံတွေ့ရတော့ တာပါပဲ။
ပြီးခဲ့သော အခန်းဆက်များ ဖတ်ရှုလိုပါက အောက်တွင် မိမိဖတ်လိုသောအပိုင်းကို နှိပ်လိုက်ပါ….
” အင်းစိန်ထောင် အတွင်း မှ ပရလောကသားများ ” ( ဖြစ်ရပ်မှန် အပိုင်း – ( ၇ ) )
အပျခလြောငျး သော့ဝိဇ်ဇာ သူခိုးကွီး မွငျ့သိနျး ”
လကျ ပါး တိုကျ မှာ ခကျခဲတဲ့နတှေ့ေ ကို စမျးခြောငျးသား ဖွတျသနျး နတေဲ့အခြိနျမှာ ထူးဆနျးတဲ့ လူတဈယောကျ နဲ့ ထပျမံဆုံတှခေဲ့ရပွနျ ပါ တယျ။ သူ့ကို တိုကျတနျးစီးဖွဈ တဲ့ ပိုးဟပျဖွူ က မိတျဆကျ ပေးတာ ပါ ။ သူကတော့ ရုပျရညျ သနျ့သနျ့ပွနျ့ပွနျ့နဲ့ သူ့ကိုယျသူ “ သူခိုးကွီးမွငျ့သိနျး” လို့ မိတျဆကျ ပါတယျ ။ သူက ရနျကုနျ သူခိုးလောကထဲ မှာ မွနျမာ့ ဆိုရှယျလဈ လမျးစဉျ ပါတီခတျေ ကတညျးက ကငျြလညျ နတေဲ့သူဖွဈ ပါတယျ ။
ထောငျထဲကို ဝငျခလုတျ ထှကျခလုတျ လုပျနရေငျး က သင်ျဃနျးကြှနျး မှာ ရှိတဲ့ မွနျမာ့စီးပှားရေးဘဏျ ကို ခေါငျမိုးက ဖောကျပွီး ငှတှေေ ခိုးခဲ့တဲ့အတှကျ နှဈကွီးထောငျကြ ခဲ့ရတာ ဖွဈပါတယျ။ သူက ဉာဏျကောငျး တယျ ။
အလုပျတဈခုလုပျရငျ သခြောလလေ့ာပွီးပိုငျမှ လုပျတယျ။ သင်ျဃနျးကြှနျးဘဏျ ကို မဖောကျခငျ ရကျပေါငျးမြားစှာ လေ့ လာပွီးမှ သပျသပျရပျရပျ ဖောကျထှငျးခဲ့ တာဖွဈတယျ။ဖောကျထှငျးမယျ့ ရကျကိုလညျး ဝနျထမျးတှေ ရုံးမတကျတဲ့ စနေ၊ တနင်ျဂနှေ ရုံးပိတျရကျ ကိုခြိနျပွီး သောကွာနေ့ ညမှာ ဖောကျထှငျးခဲ့ တာ ဖွဈတယျ။
ဖောကျထှငျးတဲ့နရောမှာ ဒီလိုဉာဏျ ကောငျးပမေယျ့ မတရား သဖွငျ့ ရရှိလာတဲ့ငှတှေေ ကို လောဘ မသတျနိုငျဘဲ အသုံးအဖွုနျးကွီး တဲ့အတှကျကွောငျ့ ထုံးစံအတိုငျး ရဲတှရေိပျ မိပွီး အဖမျးခံ ခဲ့ရတာ ဖွဈပါတယျ။
သူက ထောငျထဲ ရောကျတဲ့အခါ သင်ျဃနျးကြှနျး ဘဏျ ဖောကျထှငျးမယျ့ကိစ်စ နဲ့ပတျသကျပွီး “သူခိုးလကျကသူဝှကျလု” ခံရတဲ့အကွောငျး ကိုလညျး မခြိတငျကဲ ပွနျပွောပွလရှေိ့ပါ တယျ။ တကယျတော့ သူဖောကျထှငျးပွီး ဘဏျကယူသှားတဲ့ငှပေမာဏထကျ ကြျောလှနျပွီး ဘဏျဝနျထမျးတှကေ စာရငျးပိုပွခဲ့ တဲ့အတှကျ ဒီပှဲမှာ သူနှပျပဈြခံခဲ့ရတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
၈၈ ဒီမိုကရစေီ အရေးတျောပုံ ကွောငျ့ လှတျငွိမျးခမျြးသာ ခှငျ့နဲ့ သူခိုးကွီး မွငျ့သိနျး လှတျသှားပမေယျ့ ထုံးစံအတိုငျး ဒီလောကထဲမှာပဲ ကငျြလညျနတောဖွဈတဲ့ အတှကျ နောကျခိုးမှုတဈခုနဲ့ ထောငျပွနျကြ ခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ဖွဈပုံကတော့ သင်ျဃနျးကြှနျးဘဏျအမှု နဲ့ ထောငျကနြရောကနေ ရဲဘကျထှကျရ တယျ။ နောကျတော့ ရဲဘကျကနေ လှတျလာတယျ။ အပွငျပွနျရောကျတော့ တခွား အသကျမှေးဝမျးကြောငျး လုပျကိုငျမစား တတျတော့ဘူး။ ဒီတော့ ညတဈည လမျးမတျောမွို့နယျမှာရှိတဲ့ အိမျတဈအိမျကို ဝငျ ခိုးတယျ။
ကံဆိုးခငျြတော့ အိမျတှငျးရတနာ ပစ်စညျးတှေ ခိုးနတေုနျးမှာ အိမျရှငျအဘှား ကွီး နိုးသှားတယျ။ ဒီတော့ အဘှားကွီးကိုပါ ခွလှေနျလကျလှနျရိုကျလိုကျမိတယျ။
အဘှား ကွီးက အဲဒီခတျေက အငွိမျးစားတပျအရာ ရှိကွီးတဈဦးရဲ့ဇနီး ဖွဈတာကွောငျ့ ဒီအမှု ကို ရဲက ကွပျကွပျမတျမတျ စုံစမျးအရေး ယူတယျ။ နောကျဆုံး သူခိုးကွီးမွငျ့သိနျး လကျရာမှနျး သိသှားပွီး ခိုးမှုရော၊ ရိုကျမှုပါ နှဈမှုလုံးနဲ့ ထောငျကလြာတယျ။
အခုတော့ အငျးစိနျထောငျထဲမှာ ကငျြလညျနတော ပေါ့။ စမျးခြောငျးသားက ဘောကျခြာတှေ ကို အရောမဝငျပမေယျ့ ဆေးလိပျတော့ အရမျးသောကျတယျ။ နဘေ့ကျ ဆေးလိပျ သောကျရတာ မခကျခဲပမေယျ့ ညဘကျ ကရြငျ အကဉျြးသားမီးခွဈမကိုငျရလို့ ဆေးလိပျသောကျရတာ အရမျးခကျခဲတယျ။
ဒီ အကွောငျးကို သူခိုးကွီးမွငျ့သိနျးသိတော့ “ မငျးကှာ ဒီအတှကျမြား သောကဖွဈနေ သေးတယျ။ ဝါဒါတှကေို ဘာမှအောကျကခြံ စရာမလိုဘူး။ ငါပွမယျ။ ဒီမှာကွညျ့” လို့ ပွောပွီး ဝါယာကွိုးအနီနဲ့အနကျ နှဈခြောငျး ယူလာတယျ။
ပွီးတော့ အထဲက သှပျနနျး ကွိုး အမြှငျလေးတှကေို ထုတျလိုကျတယျ။ အဲ့လိုထုတျပွီး တိုကျခနျးဝမှာရှိတဲ့ သံတိုငျ မှာ ခတျ လိုကျတော့ ဝါယာကွိုးမှာ မီးလာ တောကျတယျ။ သူက အဲ့ဒီမီးတောကျနဲ့ ဆေးလိပျမီးညှိပွတယျ။ ဒီမှာတငျ စမျး ခြောငျးသားက သူခိုးကွီးမွငျ့သိနျးကို တျော တျောအထငျကွီးသှားတယျ။
သူခိုးကွီးမွငျ့ သိနျးကလညျး စမျးခြောငျးသား လိုအပျတဲ့ ဝါယာကွိုးကို ဘယျကဘယျလိုရှာလာမှနျး မသိ ရှာပေးတယျ။ ဒီလိုနဲ့ ညဘကျ ဆေး လိပျသောကျရတာ အဆငျပွသှေားတယျ။ တဈရကျတော့ သူခိုးကွီးမွငျ့သိနျးနဲ့ စမျး ခြောငျးသားတို့ ကံဆိုးမိုးမှောငျကမြယျ့ နေ့ တဈနေ့ ပျေါပေါကျလာတယျ။ ဖွဈပုံက တော့ အမြိုးသမီးထောငျက စတာပါပဲ။
အမြိုးသမီးထောငျမှာလညျး ထောငျ တှငျး ပွဈဒဏျလုပျရငျ တိုကျပိတျတဲ့ပွဈဒဏျ ရှိတယျ။ တဈခါက နိုငျငံရေးအကဉျြးသူ တဈဦးဖွဈတဲ့ ရနျကုနျတက်ျကသိုလျ ကြောငျး သားသမဂ်ဂ(ရကသ)က ကြောငျးသူ တငျတငျညိုဟာ မိနျးမဆောငျတနျးစီး ခငျစိနျနဲ့ ရနျ ဖွဈကွတဲ့အတှကျ တနျးစီးခငျစိနျ ဆီးအိမျ ထိသှား တယျ။
(ယငျးအဖွဈအပကျြကို အငျးစိနျထောငျမှ ဂန်တှဝငျလူမိုကျကွီးစာအုပျ တှငျဖျောပွပွီး) ဒီအတှကျ ကွောငျ့ ရကသ ကြောငျးသူ တငျတငျညိုကို တဈလ တိုကျ ပိတျလိုကျတယျ။
ပွဈဒဏျပွညျ့တဲ့နမှေ့ာ တော့ တငျတငျညိုကိုတိုကျဖှငျ့ပေးဖို့ မိနျးမ ထောငျမှူးတှကေို ထောငျပိုငျကွီးက အမိနျ့ ပေးလိုကျတယျ။ ဒါပမေဲ့ အဲဒီမှာပွဿနာ စတတျတော့တာပဲ။ တငျတငျညိုရဲ့ တိုကျ အခနျးတံခါးကိုဖှငျ့တော့ ဖှငျ့လို့ မရဘူး။ သော့က ကွောငျသှားတာလား။ သော့တံ တှကေပဲ သံခြေးတကျနတောလား။ ဂမျြး ဖွဈသှားပွီး သော့ကဖှငျ့မရဘူး ဖွဈနေ တယျ။
ဒီဇယျဆီတှေ၊ အုနျးဆီတှထေညျ့ပွီး ဖှငျ့တော့လညျး မရဘူး။ ဂတျကွီးမှာရှိတဲ့ မာစတာကီးကိုယူပွီးဖှငျ့တော့လညျး သော့ က မပှငျ့ဘူး။ ဒီတော့ ထောငျမှူးမတှလေညျး ခြှေးပွနျနပွေီ။ တိုကျထဲမှာရှိတဲ့ တငျတငျ ညိုကလညျး ပွဈဒဏျပွညျ့ရဲ့သားနဲ့ တိုကျဖှငျ့မပေးရငျ ပွဿနာရှာမယျဆိုပွီး ကွိမျး ဝါးနပွေီ။
မကွာခငျ ဒီပွဿနာက တဈ ထောငျလုံး ပွနျ့သှားပွီး နိုငျငံရေးအကဉျြး သားတှသေိရငျ ပေါကျကှဲတော့မယျ့အခွေ အနပေါပဲ။ မတတျသာ တဲ့အဆုံး ထောငျ မှူးမတှကေ ထောငျပိုငျကွီးကို သှားတငျပွ တယျ။ ထောငျပိုငျကလညျး ဂဟတေို့ပွီး သံတိုငျတှဘောတှေ ဖွတျရရငျ ရုံးခြုပျရဲ့ သဘောတူညီခကျြ လိုအပျတယျ။
အသိ မပေးဘဲလုပျလို့ သိသှားရငျ ထုခလြှော အတောငျးခံရနိုငျတယျ။ အခနျ့မသငျ့ရငျ ရာထူးတောငျပွုတျသှားနိုငျတယျ။ ထောငျ ပိုငျလညျး ရုတျတရကျ ဘာလုပျရမှနျးမသိ ဘူး။ နောကျဆုံး တိုကျထောငျမှူးကွီးက ထောငျပိုငျကွီးကို တငျပွတယျ။
သူ့ဆီမှာ သော့ဝိဇ်ဇာတဈဦးဖွဈတဲ့ အပျခလြောငျး(ခ) မာစတာကီး သူခိုးကွီးမွငျ့သိနျးဆိုတာရှိတဲ့ အကွောငျးနဲ့ သူ့ကို မိနျးမထောငျချေါပွီး ဖှငျ့ခိုငျးရငျရနိုငျတဲ့အကွောငျး တငျပွတော့ ထောငျပိုငျက ခကျြခငျြးသဘောတူတယျ။
ဒါကွောငျ့ တိုကျထောငျမှူးကွီးနဲ့ ဝနျ ထမျးတှေ သူခိုးကွီးမွငျ့သိနျးဆီ ရောကျလာ ကွတယျ။ ပွီးတော့ မိနျးမထောငျက တိုကျ တံခါးသော့ကို ဖှငျ့ပေးဖို့ပွောတော့ သူခိုး ကွီးမွငျ့သိနျးက အသညျး အသနျငွငျး တယျ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ထောငျထဲမှာ သော့ဝိဇ်ဇာမှနျးသိရငျ ထောငျဝါဒါတှကေ စိတျမခြ တော့ဘဲ အရေးကွီးတဲ့အကဉျြးသားအရာရှိ ရာထူးနရောမှာထားဖို့ ငွငျးပယျလရှေိ့ပါ တယျ။
ဒါကို သူခိုးကွီးမွငျ့ သိနျး က ကွိုမွငျ ထားတော့ သူ့ရဲ့ သော့ဝိဇ်ဇာဂုဏျပုဒျကို ထောငျထဲမှာ အသာဖြောကျထားတယျ။ ဒါကွောငျ့လညျး ဆေးရုံမှာ နရောတဈခုရ ပွီး အနခြေောငျ အစားခြောငျနတောပေါ့။ အခုတော့ အကုလိုလျဂွိုဟျစီးပွီး တိုငျပတျ မယျ့အမှု သူ့ထံကို ဆိုကျဆိုကျမွိုကျမွိုကျ ရောကျရှိလာပွီ။ သူခိုးကွီးမွငျ့သိနျးက ထောငျမှူးကွီး အကူအညီတောငျးတာကို အသညျး အသနျငွငျးတယျ။
သူခိုးကွီး ဘာ ကွောငျ့ငွငျးတယျဆိုတာကို ထောငျမှူးကွီး နဲ့အတူပါလာတဲ့ ထောငျမှူးအောငျစိုးက လညျး သဘောပေါကျသှားတယျ။ ဒီတော့ သူခိုးကွီးကို တဈခကျြလှမျးထောကျတယျ။
“ကဲ ငါပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပဲ ပွောမယျ သူခိုးကွီး။ မငျး မိနျးမထောငျက သော့ကို ဖှငျ့နိုငျရငျလညျး မငျးကို ထောငျမှာ အနေ ခြောငျအောငျ ငါအာမခံတယျ။ အေး ဖှငျ့ နိုငျရဲ့သားနဲ့ လကျကောကျကတြယျဆိုရငျ တော့ ရှတေ့ဈပတျကရြငျ ရဲဘကျထှကျဖို့ ပွငျထားပတေော့”
ထောငျမှူးအောငျစိုးရဲ့ စကားကွောငျ့ သူခိုးကွီး ဆတျဆတျခါသှားတယျ။ နောကျ ဆုံး သော့လိုကျဖှငျ့ ပေးမယျလို့ ကတိပေး လိုကျရတယျ။
ထောငျက သော့ဖှငျ့ဖို့ ဘာ ကိရိယာတှေ လိုသလဲဆိုပွီး သူခိုးကွီးကိုမေး တော့ ကွီးကွီးကယျြကယျြ ဘာမှမတောငျး ဘဲ စကျဘီးစမုတျတံလေးတဈခြောငျးသာ တောငျးတယျ။ ထောငျမှူးကွီးက သူ့ကို မယုံရဲ ယုံရဲနဲ့ စကျဘီးစမုတျတံ ပေးလိုကျ တယျ။ သူခိုးကွီးမွငျ့သိနျးလညျး တငျတငျ ညို တိုကျခနျးသော့ကို စကျဘီးစမုတျတံနဲ့ အမြိုးမြိုးစမျးပွီး ဖှငျ့လိုကျတာ ၁၅ မိနဈ အတှငျးမှာ သော့ပှငျ့သှားတယျ။
ဘယျလိုပဲ ဖွဈဖွဈ ထောငျရဲ့အကွပျအတညျး တဈခုကို သူခိုးကွီးမွငျ့သိနျးက ကယျတငျလိုကျတာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုနဲ့ သူလညျး ထောငျမှာ အပျခလြောငျးသော့ဝိဇ်ဇာ ဆိုပွီး နာမညျကွီး သှားတယျ။ ထောငျက ကတိစကားအတိုငျး သူခိုးကွီးမွငျ့ သိနျး ကို ပိုနမွေဲ ကြားနမွေဲ ထားလိုကျတော့ သူလညျး နညျးနညျးဘဝငျ ခိုကျသှားတယျ။
မွောကျ လညျး မွောကျ သှားတယျ။ ဒါပမေဲ့ သူခိုးကွီးမွငျ့သိနျးက စမျးခြောငျးသားအပျေါမှာတော့ အခငျ အမငျမပကျြဘူး။ စမျးခြောငျးသားလိုအပျ တဲ့ အကူအညီကို အမွဲပေးလရှေိ့တယျ။ ဒါပမေဲ့ သူတို့နှဈယောကျ ကံဆိုးမယျ့နေ့ တဈနေ့ ရောကျရှိလာပါပွီ။
ထောငျမှာ အကဉျြးသားတဈယောကျ အတှကျ အသားစားရကျတဈရကျပေးသလို တဈကိုယျရညျသနျ့ရှငျးရေးအတှကျ လကျသုံးဆဈခနျ့ရှိတဲ့ ရှဝေါဆပျပွာ အတုံးသေး တဈတုံးကိုလညျး ပေးပါတယျ။ ဒီအတုံး တဈတုံးဟာ လြှျောဖို့ဖှပျဖို့အတှကျ တဈပတျ စာ ဖွဈပါတယျ။ တကယျတော့ အကဉျြး သားတဈယောကျအတှကျ ဒီလောကျရှဝေါ ဆပျပွာ အတုံးတဈတုံးဟာ မလောကျငပါ ဘူး။
ထောငျကပေးတဲ့ အကဉျြးသားဝတျစုံ တှဟော ခညျြကွမျးတဲ့အတှကျ အဝတျ လြှျောဖို့ ဆပျပွာသုံးရငျ အတျောကုနျပါ တယျ။ ဒါပမေဲ့ ရှဝေါဆပျပွာ မလောကျင ကွောငျး ဘယျအကဉျြးသားကမှ ထောငျ အာဏာပိုငျကို မတငျပွရဲပါဘူး။ တငျပွရငျ လညျး ထောငျဝနျထမျးတှကေ တခွားတဈ နညျးနညျးနဲ့ ပညာပေးလရှေိ့ပါတယျ။
တဈ ခါကတော့ စဈခှေးတိုကျမှာ ပုံစံဆပျပွာ မလောကျလို့ ထောငျပိုငျကို တငျပွခငျြတဲ့ အကဉျြးသားတဈယောကျဖွဈတဲ့ သုံးခှသား သားသား ဆိုသူဟာ ထောငျပိုငျ မလာတဲ့ အတှကျ အခနျးဖျော တောငျဥက်ကလာသား လှဦးကို ဘာရနျငွိုးရနျစမှမရှိဘဲ ဂနျဖလား အောကျမှာ ခုထားတဲ့ အုတျနီခဲနဲ့ ထုသတျ ခဲ့တဲ့ဖွဈရပျတဈခု ရှိခဲ့ပါတယျ။ အခုလညျး စမျးခြောငျးသားအတှကျ ပုံစံဆပျပွာဟာ မလောကျငပါဘူး။
ဒါကွောငျ့ သူခိုးကွီးမွငျ့ သိနျးက ဆေးရုံမှာ လူနာတှေ ရခြေိုးလြှျော ဖှပျရငျး ကနျြခဲ့တဲ့ ရှဝေါဆပျပွာအတိုအစ အတုံးအခဲလေးတှကေို လုံးလုံးပွီး နလှေနျး ထားတယျ။ သူ့ကိုဘာလုပျတာလဲမေးတော့ “ ဒါဟာ စှနျ့ပဈပစ်ျစညျးတှကေို ပွနျအသုံးခဖြို့ လုပျတာ။
ထောငျဥပဒအေရ ဘာနဲ့မှ ဒုက်ခ ပေးလို့မရဘူး။ ဒီဆပျပွာခဲလေးတှကေ တနျးစီးတှရှောတဲ့ အပူစာနဲ့ တခွားစီပဲကှ” လို့လညျး ပွောလရှေိ့တယျ။
ရှဝေါဆပျပွာ အခဲလေးတှေ ခွောကျတော့မှ စမျးခြောငျး သားကို လြှျောဖို့ဖှပျဖို့ သှားသှားပေးတယျ။ စမျးခြောငျးသားကလညျး သူခိုးကွီးမွငျ့ သိနျးကို ကြေးဇူးတငျနတောပေါ့။
တဈရကျတော့ သူခိုးကွီးမွငျ့သိနျးဟာ စမျးခြောငျးသားကို အရငျပေးနကြေ ရှဝေါ ဆပျပွာခဲထကျ ပိုကွီးတဲ့ဆပျပွာခဲလေးကို ပေးတယျ။ ပွီးတော့ ထူးထူးဆနျးဆနျးစကား တဈခှနျးပွောတယျ။
“ ဒီဆပျပွာကိုတော့ မငျးမသုံးနဲ့ကှာ။ ငါ့အတှကျ သိမျးထားပေးပါ”
“ ခငျဗြား ဘာလုပျမလို့လဲ”
သူခိုးကွီးမွငျ့သိနျးက ရယျစရာမဟုတျ တာကို ရယျလိုကျတယျ။ ပွီးတော့မှ ဆကျ ပွောတယျ။
“ငါလညျး လောဘနညျးနညျးတကျ သှားတယျ။ စောငျတှေ ဘာတှေ လြှျောတဲ့ အခါကြ ဒီဆပျပွာတုံးကို မငျးဆီက ပွနျ တောငျးမလို့ သိမျးထားပေးဖို့ ပွောတာ”
စမျးခြောငျးသားလညျး သူခိုးကွီးမွငျ့ သိနျး ပွောတဲ့အတိုငျး သူပွောတဲ့ ရှဝေါ ဆပျပွာခဲကို သိမျးထား ပေး လိုကျတယျ။ အဲဒီအခြိနျ (၄) ဆောငျ တောငျယာထဲမှာ ဘိနျးဖွူတှမေိတဲ့သတငျး ရောကျလာ တယျ။
ထောငျက အတှငျးထဲကို ဘိနျးဖွူတှေ ဘယျ လို ခိုးသှငျးနသေလဲဆိုတာ လိုကျစုံစမျးနေ တယျ။ ဝနျထမျးတှလေညျး မခြောငျဘူး။ သတငျးတှကေတော့ အမြိုးမြိုးဖွဈနတော ပဲ။
ဒီသတငျးတှထေဲမှာ ဘိနျးဖွူနဲ့ ပတျ သကျပွီး ကြျောစောသတငျးရှိတဲ့ တိုကျ တနျးစီး ပိုးဟပျဖွူတို့လညျး ပါနတေယျ။ ဒါပမေဲ့ ဒီကိစ်ျစက နိုငျငံရေးအကဉျြးသားတှေ နဲ့ ဘာမှမဆိုငျတာမို့ စမျးခြောငျးသားလညျး လကျပါးတိုကျမှာ အေးအေးဆေးဆေးပဲရှိ နပေါတယျ။
တဈမနကျတော့ လကျပါးတိုကျကို ဝနျထမျး ၂၀ လောကျရောကျလာပွီး တလာ စီတယျ။ တလာစီတယျဆိုတာ ကုလား စကားဖွဈပွီး ရှာဖှရေေးလုပျတာကို ပွော တာပါ။ “ ပုံစံ” လကျပါးတိုကျတဈခုလုံးကို တဈစစီဖွဈအောငျ မှတေယျ။
အဓိကက ပိုးဟပျဖွူကို ထောငျကဖမျးတာ။ ဒါပမေဲ့ ကွိုသတငျးရထားတဲ့ ပိုးဟပျဖွူက အားလုံး ဖြောကျထားပွီးပွီ။ ဘာပစ်စညျးမှရှာမတှေ့ ဘူး။
အဲဒီအခြိနျမှာပဲ ကံဆိုးခငျြတော့ စမျး ခြောငျးသားအခနျးထဲက ပုံသဏ်ဌာနျမကတြဲ့ ရှဝေါဆပျပွာကို ဝါဒါတှေ တှသှေ့ားတယျ။ ဝနျထမျးက ထောငျမှူးကို ဒီရှဝေါဆပျပွာက လုံးထားတယျဆိုပွီး သှားပွတယျ။ စမျး ခြောငျးသားက လှမျးတားတယျ။
“ မလုပျပါနဲ့ဗြာ။ ဒီဆပျပွာတုံးက စောငျလြှျောရငျ သုံးဖို့။ လူတဈယောကျ လာအပျထားတာ”
ထောငျမှူးက ဘယျသူအပျတာလဲမေး တော့ လှယျလှယျပဲ ကိုမွငျ့သိနျးလို့ ဖွေ လိုကျတယျ။
ဘယျမွငျ့သိနျးလဲလို့ ထပျမေးတော့ သူခိုးကွီးမွငျ့သိနျးလို့ဖွလေိုကျတယျ။ စကား လညျးဆုံးရော ထောငျမှူးက ရှဝေါဆပျပွာ ခဲကို ခှဲလိုကျတယျ။
ရှဝေါဆပျပွာတုံးထဲက ထှကျလာတဲ့ စကျဘီးစမုတျတံ အတိုလေး ကွောငျ့ စမျးခြောငျးသား အံ့သွသှားတယျ။ ဒီပစ်စညျးကို တှသှေ့ားပွီးပွီးခငျြး ထောငျ မှူးက သူခိုးကွီးမွငျ့သိနျးကို ခကျြခငျြးချေါ လိုကျတယျ။ သူခိုးကွီးမွငျ့သိနျးကလညျး ဒီ ပစ်စညျးဟာ သူ့ပစ်စညျးဆိုတာ ဝနျခံတယျ။
“ မငျးဘာလုပျဖို့လဲ” လို့မေးတော့ သူခိုး ကွီးက ဆပျပွာတုံးလေးတှေ လုံးတဲ့အခါ ခိုငျအောငျလို့ထညျ့ထားတာပါလို့ ဖွတေယျ။ သူခိုးကွီး ဖွသေံလညျးဆုံးရော ထောငျမှူး တှေ ဝါဒါတှကေ တအုနျးအုနျးနဲ့ရိုကျတော့ တာပါပဲ။
တိုတိုပွောရရငျ သူခိုးကွီးမွငျ့သိနျး ကို ရုံးတငျတယျ။ ပွီးတော့ စကျဘီးစမုတျတံ တရားမဝငျကိုငျဆောငျမှုနဲ့ တိုကျပိတျလိုကျ တယျ။ သူခိုးကွီးမွငျ့သိနျးရဲ့ စကျဘီးစမုတျတံကို သိမျးထားပေးတဲ့ စမျးခြောငျးသားကို လညျး လကျပါးတိုကျမှာ ဒီအတိုငျးမထား တော့ဘူး။ နောကျဆုံး စမျးခြောငျးသားကို တှဲဖကျထောငျ (၂) တိုကျ အနောကျခွမျးကို ပို့လိုကျတယျ။
အဲဒီမှာ စမျးခြောငျးသားတဈယောကျ မကြှတျလှတျတဲ့သူတှနေဲ့ ဆုံတှရေ့တော့ တာပါပဲ။
အိမျမှာ သောငျးကနျြးနတေဲ့ ကွှကျတှကေို အပွီးမောငျးထုတျနိုငျမယျ့ နညျးလမျးမြား
” အင်းစိန်ထောင် အတွင်း မှ ပရလောကသားများ ” ( ဖြစ်ရပ်မှန် အပိုင်း – ( ၂ ) )
မိမိနေ အိမ်တွေ ၊ ဆိုင်ခန်းတွေ မှာ အတိုက်အခိုက် အနှောင့်အယှက် ကင်းပြီး ငွေဝင်လာဘ်ရွှင်ချင် တယ် ဆိုရင်..သိသိသာသာ ငွေဝင်လာဘ်ရွှင်စေပါတယ်ဗျာ
သမီးရည်း စား အ တူနေပြီး လက် မထပ်တဲ့ အမျိုးသား များ ကို ထောင်ဒဏ် ငါးနှစ်နှင့် အ ထက် ချမှတ်မည့် ဥပဒေ…